.: Ko Moe's Electronics Notes :.: February 2009
RTC, Timer And External Oscillator
RTC နဲ့ TIMER တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် ခဏခဏ ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုပြောပြချင်တာက RTC ကို Timer နဲ့ရေးတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေပါ။ အများအားဖြင့် RTC သုံးချင်တဲ့အခါ External RTC chip ကိုသုံးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Hardware overload ကိုလျှော့ချချင်တဲ့ အခါမှာဖြစ်ဖြစ်၊ Boom Price ကိုလျှော့ချင်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ဖြစ် RTC ကို routine ရေးပြီးသုံးကြပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ Timer တစ်ခုကို သုံးပြီး ရေးရပါတယ်။ အောက်မှာ RTC ရေးရတဲ့ Assembly source codeကို ပြထားပါတယ်။ C language အဖြစ်လည်း ပြောင်းပြီးရေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် RTC routine အများစုကို Assembly ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ Instruction cycle ကိုလျှော့ချချင်လို့ပါ။
အဲလို ရေးတဲ့အခါမှာ Timer ရဲ့ အချိန်ကို တိကျအောင် External Crystal (Oscillator) တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်။ အောက်မှာ ပြထားတာကတော့ Timer1 ကိုသုံးပြီးတော့ RTC routine ကိုရေးတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ Crystal ချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ ပုံပါ။
Posted by ကိုမိုး at Monday, February 16, 2009 No comments:
Labels: Hardware, PIC, Programming, RTC, Software
PIC18F85J90 Plug-In Module
TQFP (Thin Quad Flat Pack) MCU တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ။ Mass production (standard PCB လုပ်ပြီးတဲ့အခါ) မှာတော့ သိပ်စဉ်းစားစရာ မလိုပေမယ့် R & D လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ တစ်ချက်စဉ်းစားရပါတယ်။ အဲဒါက TQFP တွေက prototype PCB ပေါ်မှာ solder လုပ်ဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ ရတယ်ထားဦး ကြာမယ်လေ။ အဲဒီတော့ သူ့အတွက် Daughter board (Plug-In Module) တွေရှာရပါတယ်။ အဲဒီ Module လေးတွေက Demo, Evolution Board တွေမှာတပ်သုံးတာပါ။ ရှိရင်တော့ အိုကေပါတယ်။ မရှိရင်တော့ prototype board မှာပဲရအောင် solder လုပ်ရမှာပေါ့။ ဒါကတော့ အလုပ်ကလေး တစ်ခုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော့ အတွက်လိုအပ်တဲ့ PIC18F85J90 PIM ပါ။ သူက I/ O pin တွေကို နောက်ကျောမှာ ထုတ်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ Device တွေနဲ့ I/ O pin တွေကနေတစ်ဆင့် ဆက်ပေးရုံပါပဲ။ ဒီ Module ကတော့ LCD Interface အတွက်အဓိကပါ။
သတိထားရမှာက Interface တစ်ခုချင်းစီအတွက် အဓိကထားပြီး PIM တွေက ရှိတတ်ပါတယ်။ ၀ယ်ရင်တော့ သေချာစစ်ပြီးမှ ၀ယ်သုံးပါ။
Posted by ကိုမိုး at Friday, February 06, 2009 No comments:
Labels: Evolution/ Demo Tools, Hardware, LCD, PIC, Plug-In Module
7 Segment LED Vs7Segment LCD
7 Segment LED နဲ့7Segment LCD ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ပြောချင်လို့ပါ။
7 Segment LED Module က LED base ဖြစ်တဲ့အတွက် General I/O တွေသုံးပြီး Display လုပ်လို့ရပါတယ်။ Multliplex လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။
LCD မှာတော့ ပြဿနာနဲနဲရှိပါတယ်။ LCD မှာ Dynamic နဲ့ Static ဆိုပြီး LCD ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ Static ကတော့ LED နဲ့ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ ရိုးရိုး General I/O နဲ့အလုပ် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးပါတယ်။ Dynamic ကတော့ Oscillate လုပ်ပေးမှ Display ဆက်တိုက်ပေါ်ပါတယ်။ နို့မို့ဆို Dim ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမှာပါ။ အဲဒါကြောင့် Dynamic LCD နဲ့ software ရေးတဲ့အခါ သုံးတဲ့ MCU ကိုသတိထားရွေးပါ။ LCD support လုပ်တဲ့ MCU ကိုရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဥပမာ - PIC ဆိုရင် PIC16F91X, PIC18F85J90 series တွေက LCD အတွက် support လုပ်ပါတယ်။
ရှိပြီးသား LCD Module (အောက်ကပုံ) တွေကိုသုံးရင်တော့ အပေါ်ကကိစ္စတွေ ထည့်စဉ်းစားစရာ မလိုပါဘူး။
Labels: Hardware, LCD, PIC, Programming
(1) Electrical အင်ဂျင်နီယာ အများစုက Power နဲ့ Ground ကြားက Volt ကိုတိုင်းလေ့ရှိပြီး၊ Electronic အင်ဂျင်နီယာ အများစုက Reference နဲ့ Ground ကြားက Volt ကိုတိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ သဘောကတော့ P - G က Power ရောက်မရောက်အတွက်ဖြစ်ပြီးတော့ R - G ကြားကတော့ Signal ရောက်မရောက်ကို တိုင်းတာပါ။ တစ်ချို့ ပစ္စည်းတွေ (ဥပမာ Sensor တွေက ပါဝါရောက်သော်လည်း Signal မထွက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။ အဲဒါကြောင့် ၂ မျိုးလုံးတိုင်းပြီးမှ ကောက်ချက်ချပါ။
Labels: Electrical, General, Hardware, Short Notes